यौनकर्मी बालिकाको कथा – आफ्नो प्रेरक संसार
यौनकर्मी बालिकाको कथा
Bibas chetan — ९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १८:३८0comment
नयाँ बसपार्कको आकाशे पुलमा बेलुका ४ बजेतिर करिख १५ वर्षीया बालिका सिन्दुरमा सजिएर आइन् । उनको साथमा उनीभन्दा करिब ३ वर्षजति जेठी देखिनेले पिछा गरिरहिन् । उनी पुलको बीचमा आउनेबितिकै उनलाई घेर्ने हुल पुगे भने बाटो हिड्ने मानिसहरु छक्क हुदै उनीहरुको कुरा सन्न थाले । यत्रो सानी बच्चापनि यौनकर्मी ? भनेर चकित भएर कुरा गर्नेहरु धेरै थिए । एकअर्काबीच हेराहेर गरेर मुन्टो हल्लाउने थिए । उनीहरुको कुरा सुनेर प्रष्ट भयो । उनी सिन्दुर लाएकी यौनकर्मी रहेछिन् । उनले एकजना ग्राहक लिएर पुलबाट गायब भईन् भने उनीहरूलाई अर्काेले पिछा गरिरहिन् । उनको ग्राहक भनेर जानेलाई पिछा गर्न थाले पिछा गर्दे जाँदा कुराकानी हुन सकेन । प्रष्ट चिनेपनि म होईन भनेर पन्छिएको मात्र नभएर आक्रोशित पनि बने । ति बालिकाहरुको बारेमा जान्न मन लागेको बेला एउटा इयरफोन बेच्ने भाई आएर सोधे । उनको नाम नयन तामाङ रहेछ । उनले भने, ‘इयरफोन लिनुस ।’ मैले नलिने संकेत गरे । त्यपछि उनले प्रतिप्रश्न गरे । यौनकर्मी‘माल’ चाहिन्छ ? ‘कति’ भने मैले प्रति प्रशन गरे । १२ सय । नजाने भनेर इन्कार गरे । मैले बोलाए, ‘तिमीले ग्राहक खोजेवापत कति पाउछौ ?’ दुईसय मैले लिन्छु, हजार यौनकर्मीले पाउछन् । त्यसपछि पुलको बारमा बसेर इयरफोन व्यापारी नयनसँग लामै कुरा भयो । थाहा भयो बालिकालाई पिछा गर्ने अर्काे बालिका उनकी मालिक्नी रहेछिन् ।
त्यस्तै पुरानो बसपार्कको आकाशे पुलमा पनि सिन्दुर लाएका धेरैजसो यौनकर्मीहरु आफ्नै तरिकाले ग्राह खोज्दै थिए । उनीहरुसँग कुराकानी गर्न खोज्दा कुरा गर्न चाहेनन् । त्यहिकैमा दुई समुहबीच झगडा हुन थाले । त्यही मौकामा एक जना यौनकर्मीसँग कुराकानी भयो । प्रशंग मोडेर कुराकानी गरे । नाम बताउन चाहेनन् तर उनले भनिन्– ‘पुलिसबाट जोगिने सजिलो उपाय । पुलिस आईहालेमा परिवार हो भने पन्छिन पाईन्छ ।’
यौनकर्मीहरूको भनाई अनुसार बाध्यताले पेशा लागेका छन् भने जोगिनको लागि बाध्यताले आफु विवाहित भएको र प्रहरीले छापा मारेको खण्डमा जोगिने उपाय अपनाएको बताउछन् । उनीहरू कतै न कतैबाट अपहेलित भएर अन्तिम विकल्प र सीप नचाहिने पेशा भएकोले यौन पेशा अँगालेको तर नेपालमा कानुनविपरीत भएकोले अर्काे बाध्यताको सामना गर्न सिन्दुरको प्रयोग गरिएको परिवर्तित नाम कायनाले बताइन् ।